Fanavaozana avy amin’ny Tontolon’ny Blaogy Poloney (3) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 7:15 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 27 martsa 2006)
Araka ny Real Warsaw, toa manohitra ny fivoaran'ny Fiombonambe Eoropeana samirery i Polonina. Tsy toy ny vahaolana azo eritreretina no ijerena ny governemanta mpandala ny vahoaka vao napetraka vao haingana tao Polonina satria toa efa lany andro ireo politika mitodika mankany amin'ny hoavy. Kanefa, araka ny lazain'i Bernski ao amin'ny sokajy fanehoankevitra, mety ho lalina kokoa noho ny governemanta vao nofidiana vao haingana ireo olana ireo – voatonona ao amin'izany ireo shibboleth ho toy ny katolisisma amin'ny endriny Poloney sy ny habetsahanà taratasy karakaraina am-birao:
Firenena feno olona mahafinaritra be i Polonina, saingy mankaloiloy ilay fandàvana fiovana sy ny habetsahanà taratasy karakaraina am-birao. Nazava be tamiko izany tamin'ny andro voalohany nankanesako tao Polonina. Tsy hahita an'i Polonina ho toy ny mpilalao fototra mihitsy aho na dia afaka 20 taona aza…
Fa i Poloina ve no tokony omena tsiny amin'ny lafiny rehetra? Mitatitra ny “Poland – IP news and resources” fa hadisoan'ny ”rafitra patanty eoropeana ” ny tsy fahampiana patanty Poloney (tondro lehibe amin'ny fahaizamamorona nasionaly), amin'ny fizakàmanana ara-tsaina. Tamin'ny 2005, 79 monja ireo Poloney mpamorona no nangataka patanty, raha toa ka 13.000 izany tany Alemana.
Araka ny the beatroot, ankoatra ny olana any an-tranony, mahazo daroka any am-pitandranomasina ihany koa ny Poloney. Tsy tranga miavaka ny ady eo amin'ny Poloney sy ny mponina eny an-toerana, indrindra any Irlandy. Mametraka fifandraisana ara-pinoana ny beatroot, milaza fa tsy dia hita any amin'ny faritra Katolika ireny fidarohana ireny. Mba tsy hitanilàna, iray amin'ireo firenena vitsy nanokatra ny sisintaniny ho an'ireo Poloney mangetaheta ny hiasa i Irlandy. Teboka iray izay antintranterin'i Michael M. ao amin'ny sehatra fanehoankevitra:
Mihevitra aho fa io dia misy idirany amin'ny hoe samy nanokatra ny tsenan'ny asany ho an'ireo Fanjakana vaovao mpikambana tao amin'ny Firaismbe Eoropeana hatramin'ny voalohany ny Fanjakana Mitambatra sy i Irlandy.
Angamba mety afaka manampy i Susquatch? Vao nivoaka avy tao amin'ny X-Files, araka ny Polish Ufological Journal, tsikaritra (tapaka ny rohy) tany Atsimo Atsinanan'i Polonina ny biby iray mitovy amin'ny Yeti.
Tandremo ry Po^loney mpahay momba ny soratra, afaka vakiana amin'ny teny Poloney ny tononkalo Indiana. Tao anatin'ny lanonana nokarakarain'ny Masoivohon'i India ao Polonina, ary natrehin'ireo oloben'ny faribolan'ny literatiora Poloney, navoaka ampahibemaso ny poezia Urdu an'ilay poeta tamin'ny taonjato faha-19, i Mirza Ghalib (nadikan'i Janusz Krzyzowski sy i Surender Zahid).
Miakatra ny fanarabiana politika Poloney. ”Afaka hitantsika indray ny fahaterahana vaovaon'ny fahaizamiomehy ara-politika” any Polonina, hoy i Kurczeblade, izay mitanisa hatsikana politika vaovao mivezivezy any (indrisy, amin'ny teny Poloney).
‘Voadaroky’ ny blaogera maro tamin'ity herinandro ity ilay mpitarika ny Antoko mpanohitra fototra, i Donald Tusk. Manoratra i Michał Karnowski:
Ny didy voalohany ho an'ny antoko mpanohitra dia: mikendry foana ireo fifidianana mialohan'ny fotoana, vonona foana ny handray fitondràna. Toedraharaha mazava ho an'ireo mpifidy izany, singa mazava be ho an'ny demokrasia madio. Loza mitatao lalandava ho an'ny antoko eo amin'ny fitondrana izany. Na dia takatro aza ny filazana fa ‘arakaraky ny maha-ela an'i Laws & Justice eo amin'ny fitondrana no hahalehibe ny fanohanana ho azon'ny Sehatra Sivika,” tsy manaiky izany aho. Raha toa ka ratsy be toy ny filazan'ny mpanohitra azy fitondran'ny antoko PiS, mila ajanona dieny izao izy ireo. Ary raha toa ka tsy misy ilana ny fanaovana izany izao dieny izao, dia nisy olona nampiasa teny mahery izay tany ho any…
Izany no fanavaozana avy amin'ny tontolon'ny blaogy Poloney! Amin'ny manaraka indray – Do widzenia! (Ho tahian'Andriamanitra!)